A tọhapụrụ Chrome 85 ma ndị a bụ mgbanwe ya | Site na Linux
Google kpughere mwepụta nke ọhụrụ nke - Chrome 85 nke na-eweta mgbanwe na njikwa nke taabụ, 10% ibu ngwa ngwa, PDF nkwalite na a kpọrọ nke Mmepụta atụmatụ.
Nke isi mgbanwe nke pụtara na ụdị ọhụrụ nke Chrome 85 a bụ nke ahụ Enweela nkwado nke otu taabụ nke nwere ike daa daa ma gbasaa.
Mgbanwe ọzọ na Chrome bụ n'ihi na mbadamba mode dị ka a ọhụrụ ihuenyo mmetụ interface na ibu taabụ na-ike nke dị mfe iji hazie ma zoo (ọhụụ ọhụrụ a ga-adị na Chromebooks mbụ).
Ọzọkwa, ihe nchọgharị weebụ na-enye ugbu a ihe ruru 10% ngwa ngwa peeji site na iji usoro njikocha ihe ohuru a maara dika Profile Guided Optimization (PGO).
Google bu ụzọ webata PGO na Chrome 83 maka ndị Windows na-eji Microsoft Visual C ++ Build Environment (MSVC), ma ugbu a etinyere ya na Windows na Mac ngwaọrụ site na iji Clang.
N'aka nke ọzọ, na Chrome 85 ga-enye gị ohere idejupụta fọm PDF ma chekwaa ha nke ọ bụrụ na emeghere faịlụ ahụ, ọ ga-ekwe omume ịga n'ihu ebe ọ kwụsịrị. Akpadoro faịlụ faịlị akpado PDF maka ndị nwere nkwarụ, dị ka ndị na-eji nyocha ihuenyo, ma nyere software aka ịhazi ma wepụ data na akpaghị aka
Mgbanwe ọzọ dị mkpa maka ndị ọrụ bụ na ha nwere ugbu a Ntinye nkwado maka onyonyo AVIF. AVdị faịlụ AV1 na-ejikọ ihe oyiyi site na iji koodu AV1 ma belata oke ihe oyiyi na-enweghị oke ọnwụ.
Na nyocha nke Netflix, ha chọpụtara na AVIF nwere ike belata nha faịlụ buru ibu ma na-echekwa ọkwa dị elu nke ihe oyiyi.
Dika AVIF na akwado ihe ndi oge a dika High Dynamic Range (HDR), na saịtị dika Netflix, YouTube, na Facebook egosiputa mmasi na iji ya, Google kpebiri igbakwunye nkwado emebere. Ọkpụkpọ faịlụ.
Ọzọkwa pụta ìhè na nke a ọhụrụ version bụ mbuaha ọdịnaya download igbochi Ngwakọta ọdịnaya agwakọtara bụ faịlụ nyefere na njikọ HTTP na-enweghị nchebe mgbe ebidoro ha site na weebụsaịtị HTTPS.
Google Chrome bidoro igosi ịdọ aka na ntị na ihe njikwa Chrome iji dọọ ndị mmepe aka na mgba a ga-egbochi nbudata ndị a na ụdị n'ọdịnihu. Site na ụdị a, Chrome ga - egosiputa ịdọ aka na ntị mgbe ọ na - ebudata faịlụ, vidiyo, onyonyo na faịlụ ndị agbakọtara Faịlụ ndị a gụnyere .png, .gif, .jpg, .mp4, wdg.
Google Chrome ọ ga-egbochi faịlụ ndị agwakọtara agwakọta nke a na-eche na ọnweghị nchedo n'ihi na enwere ike ịmegbu ha iji gbasaa malware ma ọ bụ ọrụ ọjọọ ndị ọzọ. Faịlụ ndị a gụnyere .pdf, .doc, .docx, .xls, wdg.
Malite na Chrome 86, Google Chrome ga-amalite igbochi nbudata ọdịnaya agwakọtara.
Ọzọkwa, Chrome 85 na-ewebata ụzọ mkpirisi ngwa maka ngwa weebụ na-aga n'ihu (PWA) ka ndị ọrụ wee nwee ike ịnweta ọrụ ndị kachasị rụọ ọrụ ngwa ngwa. Mgbe enyere ya aka, ọ bụrụ na onye ọrụ pịa ma jide ma ọ bụ pịa aka nri akara ngosi PWA, sistemụ arụmọrụ ga-egosipụta ọrụ dị iche iche nwere ike ịmalite na-akpaghị aka site na iji ngwa weebụ a. Shortzọ mkpirisi ngwa na-arụ ọrụ ugbu a na Microsoft Edge 85 kwa.
N'ikpeazụ ọzọ nke mgbanwe na-anọchi bụ na ihe nchọgharị ugbu a na-abịa na a QR code generator na enyere gị aka ịkekọrịta weebụsaịtị.
Ma ọ bụ na mgbe onye ọrụ ahụ na-aga n'ihu na ibe, ha ga-ahụ nhọrọ menu menu ọhụrụ nke akpọrọ "Mepụta koodu QR maka ibe a." Mgbe ịhọrọ ya, ihe nchọgharị ahụ na-egosipụta ma gosipụta koodu QR nke ị nwere ike kesara ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na igwefoto nke ngwaọrụ mkpanaka na-enyocha koodu QR a, ibe ahụ ga-emepe na-akpaghị aka.
Etu esi etinye Google Chrome 85 na Linux?
Ọ bụrụ na i nwere mmasị inwe ike ịwụnye ụdị ọhụụ nke ihe nchọgharị weebụ a ma ị kabeghị aka ya, ị nwere ike ibudata installer awa na ụgwọ na rpm nchịkọta na ya ukara website.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » A tọhapụrụ Chrome 85 ma ndị a bụ mgbanwe ya
M na-eji elemenray os, na mgbe emelitere m na mbipute 85 achọpụtara m na ọ nwere nsụgharị nsogbu na ibe ụfọdụ, echere m na ọ bụ okwu ọkwọ ụgbọ ala mana na Firefox ọ naghị eme m ma yana ụdị nke gara aga 84 ọ naghị eme ma obu.
Ọgọstụ 2020: Ihe ọma, ihe ọjọọ na ihe na-adọrọ mmasị nke sọftụwia efu